Haweenayda Waxbaratay waa Kaaliyaha Cimri Dhererka iyo Nolol wanaaga. | Where Education Talks
Haweenayda Waxbaratay waa Kaaliyaha Cimri Dhererka iyo Nolol wanaaga.	October 6, 2009
Filed under: Uncategorized — aqoonkaab @ 11:03 pm Girls in a computer lab
Daraasad ay aqoonyahano reer Sweden ahi fuliyeen ayaa soo bandhigtay in:
Gabadha si fiican wax u baratay ay saamayn fiican ku leedahay fursadaha lamaanahedu ku gaadhi karo nolol fiican oo dheer. Ninka afadiisu ka gaadhay waxbarashada ilaa heer dugsi wuxu 25% uga halis badan yahay inuu yaraan ku geeriyoodo marka la barbar dhigo hadii ay afadiisu tacliinta ka gaadhi lahayd heer jaamacadeed. Qorayaaga daraasadani waxay qabaan in dumarka tacliinta leh ay fahmi karaan fariimaha caafimaad ee qoysaskoodu u baahan yihiin.
Mar hadii hadaba raga nolol wanaagoodu uu ku xidhan yahay heerka aqoonta ee dumarka ay guursadaan, waxay daraasadu sheegtay in dumarku iyaga laftooda ay saamayso dakhliga raga qaba iyo kaalinta uu bulshada kaga jiro.
Xogta daraasadani ku fadhido waxa lagu ogaaday baadhis lagu sameeyey 1.5 Milyan oo ah dadka shaqeeya ee reer Sweden oo da’dooduna u dhaxayso 30-59 jir.
Baadhayaashu waxay derseen tirakoobkii 1990 kii ee dalka Sweden waxayna raadraaceen macluumaadka ku saabsan sababaha ay u geeriyoodeen dad badani sida cudurka Kansarka, Wadne istaaga, Xanuunada Wadnaha iwm ilaa sanadii 2003da.
Daraasadan oo lagu soo daabacay wargeyska arrimaha caafimadka ka hadla ee Epidemiology and Community Healthcare waxay kaloo xustay in tacliinta gabadha iyo kaalinta ay bulshada kaga jirto ay uga muhiimsan yihiin ninka tacliintiisa gaar ahaaneed, iyadoo weliba raad ku leh nolosha gabadha lafteeda iyada oo 53% ay gabadha aan tacliinta ka gaadhin heer jaamacadeed uga halis badan tahay geerida marka la barbardhigo gabadha jaamacada kazoo baxday.
Qorayaashu waxay sheegeen in tacliintu si toos ah ula xidhiidho caafimaadka qofka halka ay si aan toos ahayn ula xidhiidho fursadaha shaqo iyo dakhliga qofka.
Sababta hadaba aqoonta gabadhu ula xidhiidho nolosha ayaa ah in gabadha wax baratay ay si fiican u taqaano noocyada cuntada ee jidhka u wanaagsan ee qoyskeedu u baahan yahay iyo weliba daryeelka caafimaad ee ubadkeeda iyo saygeeda.Waxa kale oo laga yaaba in ay hesho daryeel caafimaad oo aad u sareeyaa taasna ay ka faai’daystaan xubnaha qoyskeedu gaar ahaan hadii ay aqoon sare leedahay.
Daraasadu waxay cadaysay in caafimadka, qaabka nolosha iyo caafimaadka raaga ama mudo badan jira ay si dhaw isugu xidhan yihiin.
“Hadii ay dhab inaga tahay kor u qaadida caafimaadkeenu waa in aynu si mug leh u maalgelinaa tacliinta tayada leh dhamaan heerarkeeda kala duwan.” Sidaa waxa qaba Professor wax ka dhiga kuliyada Caafimaadka ee Boqortooyada Ingiriiska.
Guntii iyo gebagebadii, waxa hubaal ah in markasta oo tacliinta qofku rag ama dumar kuu doono ha ahaadee ay kor u kacdo in caafimaadka bulshaduna kor u kacayo sidoo kalena heerka noloshu fiicnaanayso ayna dhici karto in cimriga ama da’da qofku noolaanayo ay korodho. Waxa kale oo cad ahmiyadda ay leedahay waxbarista dumarka waayo waxay si toos ah ugu faa’idaynayan qoysaskooda una daryeelayaan caafimaadka ubadkooda, tayada cuntada ay quutaan iyo qaab nololeedkooda in kabadan waxa ay tarto gabadha aan aqoonta badan lahayni. Sidoo kale waxa aan shaki ku jirin in marka qofka cuntadiisu xumaato ama ay noqoto mid aan dheeli tirnayn lahayna waxyaabaha aasasiga u ah koriinka iyo difaaca jidhku uu qofku halis u noqdo ama u jilco xanuuno kuwaas oo liciifiya isla markaana ku keeni kara geeri degdeg ah.
Ahmed Mohamoud Elmi (Shawqi)